हाम्रो राजनीतिक धार/वाद के हो? BibekSheel Nepali's ideology is...
हाम्रो राजनीतिक धार (वाद) के हो ? What is our political ideology?
विवेकशील नेपाली दलको राजनीतिक धार (शिद्धान्त) मध्य-मार्गी “समयसापेक्ष सुधारमार्ग” हो।
विवेकशील नेपालीको गन्तव्य भनेको हाम्रै कालमा शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउनु हो। त्यहाँ पुग्न हामीले चुनेको मार्ग हो “समयसापेक्ष सुधारमार्ग” जुन सन्तुलन, सुधार अनि समयसापेक्ष व्यवहारिकतामा आधारित छ।
नागरिक र समाजको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम यी दुई बीच सह-अस्तित्व, सन्तुलन र सहकार्य चाहिन्छ। संमृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा विवेकशील नेपालीले व्यक्ति र समाज दुबैको हितलाई सन्तुलित र सुधारोन्मुख तरिकाले अगाडि बढाउँछ।
समय अनुसार आउने नयाँ विचार र व्यवहारको कारण समाज सदैव परिवर्तनशील छ। त्यसैले विवेकशील नेपालीले समय सापेक्ष रुपमा समाजलाई आवश्यक विचार र व्यवहार परिमार्जन गर्ने बाटोमा लान्छ र आफू स्वयं पनि सो अनुरुप परिमार्जित हुँदै जान्छ।
विवेकशील नेपाली आम नागरिकहरुको पूर्ण सहभागितामा आधारित जन उत्तरदायी शासन प्रणालीमा प्रतिबद्ध छ। हामीले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, अवसरमा समान पहुँच, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका साथ सामाजिक कल्याण र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित हुने छ।
विवेकशील नेपालीले सु-संस्कृत राजनीतिक व्यवहारको संस्कार आरम्भ गर्दछ। अाफ्नो राजनीतिक चिन्तनलाई नैतिक तवरले व्यवहारमा उतार्नलाई हामी महत्व दिन्छौँ।
पुँजीवादी राज्य बनाउने कि समाजवादी राज्य? कल्याणकारी राज्य कि साम्यवादी राज्य? बिगत दुई दशक भन्दा बढिका प्रतक्ष प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यो देशमा कस्तो राज्य व्यवस्था बनाउने भन्ने विवादमा नै नेपाली राजनीति रुमल्लिई रहेको देखियो। २१ अौँ शताव्दीमा के अब पनि नेपाली राजनीति व्यवहार केन्द्रित नभई, यस्तै राज्य बनाउने वा उस्तै राज्य बनाउने भन्ने सवाल मै सिमित रहने हो त? राज्य मात्र होइन, नागरिक कस्तो बनाउने, समाज कस्तो बनाउने वा सरकार कस्तो बनाउने यस बारे किन परम्परागत नेपाली राजनीतिक दलहरुले ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैनन्?
नेपाल राष्ट्रको समुन्नतिका लागि राजनीतिले राजनीतिकै परिभाषा र व्यवहारलाई नै फराकिलो पार्ने साहस गर्नुपर्छ। अब राज्य मात्र होईन, नागरिक, समाज र सरकार सबैमा समयसापेक्ष रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ। राज्य त घरको छानो मात्र हो, जग, भित्ता र भऱ्याङ्ग त नागरिक, समाज र सरकार नै हो, तिनैमा परिवर्तन नभई छानो कै मात्र कुरागर्दा सबथोक लथालिंग हुन्छ। बिगतको लामो राजनीतिक उतारचढावले एउटा कुरा प्रश्ट देखाएको छ कि अबको राजनीति नयाँ भएर मात्र पुग्दैन, यो नितान्त पृथक ढंगबाट अघि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि अबको राजनीतिले व्यवहार, मान्यता, संरचना र शिद्धान्त सबैमा २१ अौँ शताव्दी सापेक्ष राजनीतिक नविनता अपनाउनै पर्छ। यदि हाम्रै कालमा नेपाल लाई शान्त र समृद्ध बनाउने चेष्ठा लिने हो भने अबको नेतृत्वले राष्ट्रका निम्न चार प्रमुख खम्बाहरु: नागरिक (व्यक्ति), समाज, सरकार र राज्य सबैको रुपान्तरणलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।
१) नागरिकलाई विवेकशील
२) समाजलाई उद्यमशील
३) सरकारलाई सेवक
४) राज्यलाई हितकारी
१) विवेकशील नागरिक:
जब देशमा विवेकहिन व्यक्तिहरुकै बर्चस्व हुन्छ भने उनैले हाँक्ने समाज वा सरकार कसरी राम्रो बन्न सक्छ? अर्को तिर अन्याय सहँदै बस्ने व्यक्तिहरुबाट कस्तो राज्य निर्माण हुन्छ? जबसम्म २१ औं शताव्दीमा टिक्नको लागि चाहिने मानवीय मूल्यमान्यताको अभ्यास नेपाली नागरिक र परिवार भित्र न्यून रहन्छ तब सम्म हाम्रो रोजाई र व्यवहारले कालाबजारी, नाताबादी, कृपाबादी, भ्रष्टाचारी, वेमतलवी नेतृत्वलाई नै रोज्छ। त्यसको परिणाम लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र सिन्डिकेट’ राज्य व्यवस्था हावी हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई सक्षम राज्य बनाउन देशका अाम नागरिकमै केही अाधारभूत नैतिक मूल्यमान्यता बलियो बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। जब प्राय अाम नेपालीमा के ठिक र के बेठिक छुट्टाउने विवेक जाग्छ र उहाहरुले त्यसलाई व्यवहारमै उतार्न थाल्नुहुन्छ तब नेपालीहरु विवेकशील बन्न थाल्छन्। यसका लागि नेपालीहरुले अाफु भित्र कम्तिमा पनि यी केहि मान्यताहरु बिकास गर्नु जरुरी देखिन्छ।
क) निष्ठा: व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने अनि सामुहिक हित र सेवालाई तिरस्कार मात्र होइन निमोठ्नै खोज्ने अाजको नेपाली समाजलाई तुरुन्तै रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ। यसो गर्न देशमा नागरिकहरु निष्ठावान बन्नु अपरिहार्य छ। कुनै पनि निष्ठावान नागरिक आफ्नो काम-कार्यप्रति पनि पूर्ण इमान्दार रहन्छ र नैतिकतामा अडिग रहि सत्यको पक्षमा निरन्तर पहल गरि रहन्छ। निष्ठावान नागरिक नै भ्रष्ट समाज सफा गर्ने माध्यम हुन्।
ख) पारदर्शिता: भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा नेतृत्व देखि अाम नागरिक सम्म क्यान्सर जसरी फैलिएको अवस्था छ। यस्तो सामाजिक क्यान्सर बिरुद्ध सबैभन्दा बलियो अस्त्र भनेकै हर एकमा पारदर्शिताको संस्कार स्थापित गर्नु पर्छ। अाफु पनि पारदर्शी हुने र अरुबाट पनि यहि अपेक्षा गर्ने सु-संस्कार नागरिकहरुमा बिकास गराउन सके समाजमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्न गाह्रो हुन्छ। साथै भ्रष्टाचारकै कारक तत्वहरु टाढै बाट छर्लङ्ग देखिन थाल्छ। विवेकशील नागरिकहरु अाफ्ना कार्यहरुमा पारदर्शी रहन्छन्।
ग) उत्कृष्टता: अाफु पनि उत्कृष्ट बन्न कम्मर कस्ने अनि अरुको उत्कृष्टतालाई पनि उचित कदर गर्ने नागरिकले नै नेपालमा अात्मसम्मान, सहिष्णुता र समृद्धि भित्र्याउछँ। अहिले हरेक नेपाली भित्र नङ्ग्रो गाडेको नातावाद, कृपावाद, जातिय अहंकारवादका कुसंस्कारलाई उखेल्न “कर्म”लाई संस्थागत गराउनु जरुरी छ जसले गर्दा नेपाली समाज उत्कृष्टता, नविनता र श्रृजनशीलताको भरमा अडिग रहन्छ न कि वंश, नाता वा कृपावादमा।
घ) साहस: साहस बिना जति बुद्धिजीवी व्यक्तिले पनि अाफ्नो ज्ञानको सदुपयोग गर्न अाँट्दैन। अहिले नेपालमा यति धेरै अन्याय र अत्याचार देख्दा र खेप्दा पनि हामी प्राय चुपै छौँ। भएका विवेक पनि प्रयोग गर्ने साहस नहुदाँ पनि समाजमा भरिपूर्ण व्यक्तिगत रुपमा उत्कृष्ट नेपालीहरु सामुहिक रुपमा सफल हुन सकेका छैनन्। सत्य स्थापित गर्न साहस नगर्नेहरु विवेकशील हुन् सक्दैनन् ।
ङ) समानुभूति: नेपालमा विविध उमेर, समुदाय, वर्ग, पेशा, लिङ्ग, भूगोल वा सोचका मिश्रणका भरमा नेपालीहरुले विविध पहिचान बनाएका छन्। यस्तो विविध सोच, विचार र धारणाले भरिएको नेपाली समाजमा एक-अर्काका सोच, विचार र व्यथालाई “समान” अनुभूति गर्न सक्ने समावेशी संस्कार हामीले बिकास गरे मात्र यो देश हाम्रै कालमा शान्त अनि समृद्ध देश बन्न सक्दछ। विविधताले भरिएको नेपालमा एक-अर्का प्रति समानुभूति बोक्न सक्ने ‘विवेकशील’ नागरिकले नै समाजलाई एक जुट राखी राख्न सक्छ।
च) विनम्रता: मै मात्र सक्छु, मैले मात्र जानेको छु, मेरै गोरुको बार्है टक्का जस्तो अहंले ग्रस्त नेपाली समाजलाई तह लगाउन यहाँ विनम्र नागरिक अगुवाहरुको अत्यन्त खाँचो छ। अाफु बारे कमै सोची अरुको बारेमा बढि सोच्ने, अाफु एक्लैले मात्र सकिन्न, अरु पनि चाहिन्छ भन्ने बिनम्रता जब अाम नेपाली भित्र ल्याउन सके मात्र अहिलेको स्वार्थीपनाले जरो गाडेको समाज क्रमश परोपकारी र राष्ट्र प्रेमी बन्दै जान्छ।
अबका चुनौती भनेकै यस्तै मुल्यमान्यता बोकेका सक्षम् र इमान्दार विवेकशील नागरिकहरुलाई अग्रपंगतीमा स्थापित गर्नु हो।
२) उद्यमशील समाज:
परनिर्भरतामै रम्ने अाजको परजीवी नेपाली समाज, राष्ट्रकै लागि सकस बनेको छ। भनसुन र कृपाकै भरमा काम मिलाउने, घरका होनहारलाई लाहुरै पठाउनु पर्ने, चाकडीबाटै उत्तरोन्नति गर्नु पर्ने बाटाहरु नेपाली समाजले रुचाँउछ र स्विकार्छ। यहाँ एकातिर समाजसेवालाई नै गरि खाने भाडोँ बनाउनेहरु सबै भन्दा सम्पन्न कुलिनहरुमा गनिन्छन् भने अर्कोतिर देशमै गरि खान्छु भन्नेलाई ‘पागल’ कहलाईन्छन्। त्यसैले अब यस कुसंस्कार हावी समाजको बिकल्प भनेको यस्तो पृथक समाज हो जसले अात्मनिर्भरता, श्रृजनशीलता, साहसीपन, दृढता, स्वावलम्वीपन र सफलता लाई पुज्छ। नेपालमा यस्तो “उद्यमशील”समाज चाहिएको छ जसले उत्कृष्टता र योग्यतामुखी संस्कारलाई अात्मसात गर्दै अहिले व्याप्त नातावाद, कृपावाद, जातियवाद जस्ता कुसंस्कारको जरो उखेल्ने वातावरण बनाउँछ। उद्यमशीळ समाजले हरबखत हरेक नागरिकलाई स्वावलम्वी हुन प्रेरित गर्छ जसले जन्म, वंश वा जातको अाधारमा होईन कर्म, लगन र चरित्रका अाधारमा मुल्याङ्कन गर्छ। उद्यमशील समाज सदैव उत्कृस्टताका लागि सक्रिय रुपमा यथास्थितिलाई चुनौती दिई रहन्छ, जसले गर्दा समय सापेक्ष ज्ञान प्रयोग गरी समाजलाई सदैव रुपान्तरण गर्दै लान्छ जसले गर्दा राष्ट्र विकसित रहन्छ।यसले नेपालमै काम गरिखाने संस्कृति र स्वावलम्वी संस्कारको श्रिर्जना गर्छ जसले नेपालबाट बिदेशिन बाध्य दशौँ लाख नेपाली दाजुभाई-दिदीबहिनीलाई देशमै अात्मनिर्भर बनाउँछ। अर्कोतिर यसले नेपाल छाड्न चाहने कयौँ भित्र यहि अाफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाँउछ। नेपाल हाम्रो जन्मथलो मात्र नरहि कर्म थलो बन्न नेपाली समाज उद्दमशीळ समाज बन्नै पर्छ।
३) सेवक सरकार:
राणाकाल देखि अहिले सम्म हामीळे सरकार त धेरै भोग्य़ौँ, तन्त्र धेरै पायौँ, तर कहिल्यै पनि हामीले खोजेकै जस्तो सेवक प्रवितिको पाउन सकेनौ। लोकतन्त्रका ल्याउन लड्यौँ, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा ल्याउन तिर ध्यानै पुगेन। सरकारमा सेवा गर्न त धेरै नेतृत्व पुगे तर अधिकांश पेशा वा पुरस्कारको रुपमा लिई फर्क्यौँ। शक्तिमा पुग्न मरि-मेट्यौँ, तर पुगेपछि के गर्ने चालै पाएनौँ। नागरिकको लागि भन्दै शासन चलायौँ तर शासन टिकाउन मात्रै नागरिकलाई चलायौँ। सेवक सरकारको सपना अधुरै रह्यो। सेवक सरकार भनेको त जनमुखी, सेवा प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक सरकार पो हो। यसको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै हरेक नेपालीलाई समृद्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । त्यसो गर्नको लागि सेवक सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्छ साथै राज्य र नागरिकहरूको प्रतिष्ठा पनि रक्षा गर्छ। सेवक सरकारले कानून र संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै उद्यमशील समाज निर्माणमा तल्लीन विवेकशील नागरिकहरुको भरपुर संरक्षण गर्छ। यसले हरेक गाउँ र शहरलाई आत्मनिर्भर वन्ने माहोल प्रदान गर्न स्थानीयकै स्वशासन स्थापित हुन्छ। चुस्त, उत्तरदायी एवं सेवादायी सरकारले व्यक्ति र समाज बीच जहिले पनि संयोजनकारी र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले नै अबको नेतृत्वले नेपाललाई २१ औं शताब्दी सापेक्ष राष्ट्रमा स्थापित गर्ने हो भने राष्ट्रमा सेवक सरकार स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुनेछ।
४) हितकारी राज्य:
आधुनिक विश्वमा राज्य र नागरिक एकै सिक्काका २ पाटा हुन्। य़ी एक अर्काका परिपुरक हुन् त्यसैले यी दुबैलाई संगै हेरिनु पर्छ। दुबैको एक अर्का प्रतिको मित्रवत सम्बन्ध लाई स्थापित गर्दै आफ्नो दायित्व र अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा ब्याख्या र प्रयोग गर्न सके मात्र हामी आर्थिक र सामाजिक बिकास गर्न सक्छौ। जब राज्यले नागरिकलाई चाहिने सामाजिक र अार्थिक हित हुने खालको नीति निर्माण गरी सेवक सरकारद्वारा कार्यान्वन गराउँछ तब त्यो राज्य हितकारी राज्य बन्न थाल्छ। हितकारी राज्यले अवसरमा समानता स्थापित गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई चाहिएको बखतमा हित गर्न तयार हुन्छ र चुस्त तरिकाले मद्दत गर्छ। त्यसैगरी हितकारी राज्यले व्यक्ति र समाज दुवै बीच सन्तुलन, सहअस्तित्व, सहकार्यको वातावरण श्रृजना पनि गर्छ। यस्तो मध्यमार्गी बाटो लिएर हिडँने हितकारी राज्यले न त पूँजीको मात्रै पुजा गर्ने व्यक्ति-केन्द्रित पूँजीवादी राज्यमा सिमित हुन्छ, न त देशको श्रोतले धान्नै नसक्ने वितरणमुखी साम्यवादी राज्यमा अडिग रहन्छ। हितकारी राज्यमा आम नागरिक राष्ट्रिय हितलाई महत्वका साथ लिन्छन र सो हासिल गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यस्तै राज्यले पनि व्यक्तिगत हित र स्वतन्त्रताको सुनिस्चितता गर्छ।
यसरी माथी उल्लेखित तरिकाले व्यक्ति, समाज, सरकार अनि राज्यमा सकारात्मक हस्तक्षप गर्दा यस्तो नेपाल राष्ट्रमा रुपान्तरण हुदैँ जान्छ जहाँ एकातिर नागरिकहरु जिम्मेवार बन्दै जान्छन् भने अर्को तिर नेतृत्व जवाफदेहि (उत्तरदायी)। यस्तो नेपालमा एकातिर कर्मठ नेपालीहरु समृद्धिको मार्गमा लम्कन्छन् भने अर्कोतिर त्यसको लागि चाहिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ढुक्क भई उपयोग गर्छन्। यस्तो नेपालमा एकातिर नागरिकहरु सशक्त बन्दै जान्छन् भने अर्कोतिर सरकार हरेक तहमा चुस्त र सेवादायी बनाईदैँ जान्छ। यस्तो नेपालमा विविधतालाई अात्मसात गर्दै नेपालीहरु समावेशी हुदैँ जान्छन् भने अर्को तिर २१अौँ शताप्दी सापेक्ष लोकतन्त्र स्थापित गर्न देश चलाउने प्रणालीहरुलाई खुला र सुधार गर्दै लान्छन्। यसरी नेपाल हाम्रै कालमा शान्त र समृद्ध राष्ट्र बन्छ।
अर्थविदहरुले सन् २०५० सम्ममा विश्व कै पहिलो समृद्ध राष्ट्र चीन र तेस्रो भारत बन्ने अनुमान गरेका छन्। केहि दशकमै यतिविन समृद्ध हुने छिमेकी बीच भएकोले यो सम्भावना र चुनौती दुवैका लागि तयार रहन अब हामीले माथी उल्लेखित मार्गहरु द्वारा राज्य मात्र होईन व्यक्ति, समाज, सरकार मै अामुल रुपान्तरण ल्याउनु पर्छ। त्यसैले अाउनुहोस् अाजै देखि नागरिकलाई विवेकशील बनाअौँ, समाजलाई उद्यमशील, सरकारलाई सेवक अनि राज्यलाई हितकारी! शान्त र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा सम्भव बनाअौँ!
हाम्रो दलको मूलभूत सिद्धान्तहरु के के हुन् ?
सत्य, अहिंसा, कर्म र दीगो विकासमा विश्वास गर्नु !
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताको हित गरी विश्वस्तरमा मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नु !
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी सर्वोच्चताको सम्मान र पालना गर्नु!
स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार हु्नु!
समानता र आत्मसम्मानमा आधारित भै राष्ट्र निर्माणको लागि सहकार्य गर्नु !
अरुको अधिकारको सम्मान गर्नु हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो। आ-आफ्‍नो कर्तव्य पालन गर्नु नागरिकको दायित्व हो। यस्ता कर्तव्य औपचारिक रुपमा कुनै पदसँग जोडिएर वा अनौपचारिक रुपमा पारिवारिक, सामाजिक र व्यक्तिगत क्रियाकलापहरुसँग जोडिएर आउन सक्छन्। सजायको डर वा कानुनको कारणले मात्र नभई भित्रैदेखि स्वविकेकले आ-आफ्‍नो कर्तव्यवोध गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो। यदि बहुसंख्यक नागरिक गैरजिम्मेवार हुने हो भने त्यसको निदानको लागि राष्ट्रले गर्नुपर्ने कानुनी उपचार निम्ति जनताकै लागि उपयोगमा आउने स्रोतहरुको अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तथा कुसंस्कारहरुले जरो गाड्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोग र सुंसस्कारबाट गर्दा मात्र देशको बिकास सम्भव हुन्छ।
नेपाली बन्नु भनेको नै जिम्मेवारी बोक्ने नेपाली बन्नु हो। जबसम्म नागरिकहरु जिम्मेवार हुदैनन् तबसम्म यो देश शान्त र समृद्ध कदापि हुने छैन।
जब नेपालीहरु अा-आफ्ना कामकारवाहीमा जवाफदेही बन्न थाल्छन् तब उनीहरु इमान्दार, मेहनती अनि जिम्मेवार हुन्छन् । कुनै नेताले पाउने पुरस्कार वा सँजाय उसले वहन गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनमा निर्भर रहन्छ। नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन हामी त्यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपले उत्तरदायी तुल्याउने सहज माध्यमहरू सिर्जना गर्नेछौं। शासन विधिमा हामीले नियन्त्रण र सन्तुलनका संरचनाहरू निर्माण गर्नेछौं। हामी हाम्रा सरकार, आदर्श, लक्ष्य र योजनाहरूलाई पारदर्शी बनाउन खुल्ला नीति अपनाउनेछौं‌। यसरी हाम्रो नेतृत्व नेपाली भूमि भूगोलमा मात्र सीमित नभई सारा मानवजातिप्रति नै उत्तरदायी हुनेछ।
समृद्धि मानिसको आधारभूत अधिकार हो। अरू विभिन्न आधारभूत मानव अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न समृद्धि अपरिहार्य छ। समृद्ध व्यक्तिसँग प्राय: प्रतिष्ठा र सम्मान हुन्छ किनकि उसले कसैको अगाडि हात नजोडी, भीख नमागी, अरूको अधिकार नखोसी आफू र आफ्नो परिवारको मूलभूत आवश्यकताहरू सजिलै परिपूर्ति गर्न सक्छ। उसले आफ्नो परिवारलाई उचित शिक्षा प्रदान गरी सशक्त बनाएर लोकहितमा सक्रिय रहन उत्प्रेरित गर्छ। हामी हरेक नेपाली समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौं र यो सपनालाई साकार पार्न हामी पूर्णरूपले प्रतिवद्ध छौं। समृद्ध नेपालको लागि हामीले उद्यमशील क्रान्ति परिकल्पना गरेका छौं।
कुनै पनि समाज तबमात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ जब त्यो समाज सशक्त हुन्छ। हामी सशक्त भयौं भने हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्न जान्दछौं, हाम्रो दायित्वहरू पूरा गर्न सक्नेछौं र स्वाधीनताको संरक्षण गर्न समेत सक्षम हुनेछौं। एउटा सशक्त नेपालीसँगमात्र ठीक-बेठीक छुट्याउन सक्ने विवेक, नैतिक अनुशासन एवं मूलुकको विकास गर्ने क्षमता हुन्छ। सशक्त नेपालीहरूले सरकारद्वारा नै आफ्ना सारा आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुनुपर्दछ भन्ने अपेक्षा राख्दैनन्। बरु उनीहरुले स्थानीय समुदायहरुबीच नै सहयोग र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। सशक्त नेपालीहरू ती हुन् जो बोलेर होइन, गरेर देखाउँछन्।
आफ्ना समुदायहरुलाई सारा विश्वसँग परिचित र घुलमिल गराई सशक्त बनाउन चाहिने स्रोतहरुको लगानी गर्नेछौं। यसो गर्नाले उनीहरु एक-अर्कासँग स्वाभिमानका साथ सहकार्य गर्नसक्ने हुन्छन्। यसरी विश्वसँग जोडिएका र स्थानीय तहमा सशक्त बनेका समुदायहरुले नै सुरक्षित, सफल र स्वतन्त्र नेपाल निर्माण गर्छन्।
कसैको व्यक्तिगत आचार-विचार, ज्ञान वा गतिबिधिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सरकारको हुँदैन। कसैको निजी व्यक्तित्वमा जबर्जस्ती कुनै पनि धार्मिक, राजनीतिक वा नैतिक आदर्शहरू लाद्‍ने अधिकार कसैसँग हुदैन। यही नै स्वतन्त्रता हो। हाम्रा भावी सन्ततिहरूले संसारको सम्बर्धन र पर्यावरणको संरक्षण गर्नको लागि उर्जायुक्त स्वतन्त्र वातावरण बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तहरू – नवीनता र सिर्जनशीलतालाई कहिल्यै पनि सामाजिक वा राजनीतिक बन्देज लगाउनु हुँदैन। अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नाले नै हामीलाई यस संसारमा स्वतन्त्रताका प्रबर्द्धक र संरक्षकको रूपमा चिनाउन सहयोग गर्दछन्। अन्त्यमा, स्वतन्त्रताको सही उपयोगले नै हामी स्वतन्त्र नेपाली बन्नेछौं ।
नेपालीहरुको विविधतालाई हामी एक सुन्दर उपहारको रूपमा मान्छौं। बिगतका बिभिन्न कालखण्डमा यस विविधतालाई उचित रूपले ग्रहण नगरिएकाले नै साधन स्रोतमा उचित विभाजन र राज्यशक्तिमा उचित समावेशिता हुन सकेन। हामीले हाम्रो विविधतालाई दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्नेछौं। सामाजिक कोलाहललाई अन्त्य गर्न हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन केन्द्रित हुनेछौं ताकि हरेक स्थानीय व्यक्तिलाई मुलुकभरी हुने शान्तिपूर्ण, समृद्ध समाज निर्माणका कार्यमा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएको अनुभूति हुनेछ। हामीले हरेक नेपालीलाई समान अवसर दिनेछौं जसको परिणामस्वरूप विविधतामुलक समाजले समान लाभको उपभोग गर्न सकोस्।
विविधतामा समानता, एकताभित्र स्वाभिमान, समृद्धिका साथ शान्ति – यही हाम्रो राष्ट्रिय नारा हुनेछ । हामी योग्यतामुखी संस्कृतिलाई स्थापित गर्दै, ऐतिहासिक त्रुटिहरूलाई सँच्याउन प्रतिवद्ध छौं। हामीलाई विश्वास छ विविधताले भरिएको नेपालका जिम्मेवार नागरिकहरुले नै बलियो, एकजुट नेपाल बनाउनेछन्।
नागरिकको हितमा काम गर्ने सरकार जहिले पनि नागरिकको अस्तित्व स्वीकारी तिनीहरूसँग खुल्ला हृदयले काम गर्न चाहन्छ। एक जनमुखी, सेवा प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख कामहरु हरेक नेपालीलाई समृद्ध हुने मौका दिनु, विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु, तथा देश र नागरिकहरूको प्रतिष्ठा रक्षा गर्नु हुन्। सेवक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै नागरिकहरूलाई राष्ट्र-निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिनु हो। एक प्रभावशाली सेवक सरकारले कानून र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्दै राष्ट्रनिर्माणमा तल्लीन नेपाली नागरिकहरुको संरक्षण गर्छ, हरेक गाउँ र शहरलाई आत्मनिर्भर वन्न बल प्रदान गर्छ अनि विवेकशील स्थानीय स्वशासन स्थापित गर्नमा सहयोग गर्छ। यस प्रकारको चुस्त सरकार उत्तरदायी एवं सेवा प्रदान गर्ने किसिमको हुन्छ।
कुनै पनि सेवक सरकार तबमात्र बलियो हुन सक्दछ, जब नेपालीहरू उसको पक्षमा एक भई उभिन्छन्। जब यसरी नेपालीहरू एक हुन्छन्, तबमात्र राज्यसत्ता यथार्थमा सेवा प्रदान गर्ने बन्न सक्दछ। यदि नेपालीहरू खण्डित र विभाजित भई बस्ने हो भने सरकार जनताको सेवक बन्नुको साटो मालिक बन्ने खतरा रहिरहन्छ । सरकार सर्वशक्तिशाली मालिक वा असक्षम व्यापारिक-रोजगार दिने संस्था कदापि हुनुहुँदैन।
विश्व परिवर्तनशील छ। विगतको सय वर्षभित्रै हामीहरु पिछडिएको समयबाट आजको इन्टरनेटको युगमा आइपुगेका छौं। वरिपरिका समाजहरु समृद्ध भइरहँदा हामी मात्र अलग्गै पिछडिएर रहन सक्दैनौं। यस्तो अवस्थामा आफू-आफूमा वा अरुसँग झगडा गरी बसिराख्ने हो भने हाम्रो अस्तित्वमा नै संकट अाउँदछ। हाम्रो उद्देश्य समय-सापेक्ष सिद्धान्त, कार्य एवं प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्ना समुदायहरुका विकास गरी विश्वसँगै काँधमा काँध मिलाउने परिस्थितिमा पुर्याउनु हो।
हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरुसँग हामी पारस्परिक आदर र आत्मसम्मानमा आधारित सम्बन्धको पक्षमा छौं। तिनको आर्थिक सम्पन्नताको फल उपभोग गर्न हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उनीहरुको अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछौं। हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामीले बलियो आर्थिक सम्बन्धहरु विस्तार गर्यौं भने अतिवादी राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक तनावलाई टाढै राख्न सकिनेछ।
त्यसैले विदेश नीति पनि समयसापेक्ष रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ। हाम्रो लक्ष्य यस्तो समाज निर्माण गर्नु हो, जसले सकारात्मक सोच र औद्योगिक कार्यहरूवाट नवीनता र सिर्जनशीलता वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ । यस वातावरण निर्माणले गर्दा मानव विकासको उच्चतम् गतिसँग हाम्रो समाजले आफ्नो गति जोड्न सक्छ । हामीले समयसापेक्ष सुधारलाई अँगाल्नुपर्छ, अन्यथा हाम्रो अस्तित्व नै मेटिनेछ। त्यसैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी हामीले नेपाललाई खुल्ला, सुधार र विकासको बाटोमा लगिराख्छौं।
हामीले यस्ता विश्वसनीय संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ जसमा एउटै नेतृत्व समूहको भर पर्नुको साँटो नागरिकहरूले बेला-बेलामा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्न सकून्। हामीले नागरिकहरूलाई यति आत्मनिर्भर बनाऔं कि हाम्रा अगुवाले आफ्नो समय प्रतिभावान् नागरिकसँग मिलेर महत्त्वाकाङ्क्षी देश विकासका योजनाहरूमा व्यस्त हुन सकून्। यसरी नै बन्छ शान्त र समृद्ध, हाम्रो नेपाल ।
यी मार्गदृष्टि लिएर हामी के गर्नेछौं त ?
१) हामीले एक शान्त नेपाल निर्माण गर्नेछौं,
जहाँ द्वन्द्व, हत्या-हिंसा अनि यातनाको वातावरण हुँदैन र जहाँ हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छौं।
जहाँ हरेकले कानूनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नेछन् र सवैलाई समान कानून लागु हुनेछ।
जहाँ कसैले पनि कानून भङ्ग गरेमा भोग्नुपर्ने परिणाम समयमै र उचित मात्रामा भोग्नेछ।
२) हामीले एक सचेत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू–खाना, पानी, विजुली, बास, इन्धन, सञ्चार आदि सुविधाहरू सुलभ रूपले पाइनेछ।
जहाँ हरेकको विश्वविद्यालय स्तरीयसम्मको शिक्षामा सुलभ पहुँच हुनेछ र विवेकशीलताको बृहत् भावना विकास हनेछ।
जहाँ राष्ट्रव्यापीरूपमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुनेछ।
जहाँ एक सक्षम उदाहरणीय समृद्ध समाजको निर्माण हुनेछ जसमा हरेकले सुखी र सम्पन्न जीवन बिताउनेछन्।
३) हामीले एक उद्यमशील नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ उद्यमशील संस्कृति स्थापित हुनेछ।
जहाँ हरेकका परिवार अनि भावी पुस्ताले समृद्ध हुने मौका पाउनेछ।
जहाँ हरेकले जोखिम मोल्दै गरेको मेहनतले संपन्न हुने अवसर पाउनेछ।
जहाँ हरेकले लगानी गरि आफ्नो सम्पति अरु ठाँउ भन्दा तीव्र रूपले वृद्धि गर्न पाउनेछ।
जहाँ सेवक सरकारले उद्दमशील कार्यलाई भौतिक र सामाजिक संरक्षण दिनेछ।
जहाँ उद्योग, व्यवसाय, कृषि र सेवा प्रदायक व्यवसायको निमित्त आधारभूत संरचना उपलब्ध हुनेछ।
जहाँ एकाधिकारवादी, पक्षपाती नीतिहरूलाई लागू हुन नदिई समान र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
जहाँ हाम्रा समस्त प्राकृतिक, प्राज्ञिक तथा भौतिक साधन स्रोतहरूलाई देशबासी र समस्त मानवजातिको कल्याणमा प्रयोग गरिनेछ।
जहाँ निम्न मुद्रास्फीति(महंगी) कायम गरि व्यापार-व्यवसायलाई चाहिने स्थिर वातावरण निर्माण गर्ने आर्थिक नीतिको विकास गरिनेछ।
४) हामीले शान्तिको प्रवर्द्धकको रुपमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्नेछौं
जसले युद्धलाई निषेध गर्नेछ र आफ्नो सेनालाई आत्मरक्षाको लागि वा शान्तिसेनाको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नेछ।
जसले भारत र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न समन्वयकारी वातावरणको निर्माण गर्नेछ।
जसले विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भइरहेका द्वन्द्व र तनावहरुको समाधानमा अहम् भूमिका खेल्नेछ।
५) हामीले स्वतन्त्र नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ सबैले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।
६) हामीले मुक्तिको प्रत्याभूति गर्न सकिने नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ हरेकले समान अवसर पाउनेछन्।
जहाँ हाम्रो घरजग्गा, पूँजी, विचार, लगायतका सम्पतिहरू कानूनी रूपले संरक्षित हुनेछन्।
जहाँ जाति, उमेर, लिङ्ग, रङ्ग, धार्मिक मान्यता, राजनीतिक विश्वासको आधारमा विभेद नहुने गरी समान अधिकार उपलब्ध हुनेछ।
७) हामीले एक न्यायमूलक नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ सशक्त अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्थापित हुन्छ।
जहाँ सबैलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेछ।
जहाँ यस्तो व्यवस्था बन्छ जसले हरेकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, अपराधीहरूलाई दण्डित गर्छ, अनि हरेकलाई जिम्मेवार हुन उत्प्रेरित गर्नेछ।
जहाँ विश्वभरवाट अनेक मूलका व्यक्तिहरू नेपालमा आई काम गर्न, शान्तिपूर्ण रूपले बस्न र निश्चित योग्यता र गुणका आधारमा यसलाई आफ्नो स्थायी बासस्थान बनाउन सक्नेछन्।
जहाँ नेपालको विविधतामा गौरवान्वित भइनेछ र यसलाई प्रोत्साहित गरिनेछ जसले गर्दा संसारभरका कुनै पनि व्यक्तिले यहाँ आएर घरको रुपमा बास बस्न सक्नेछन्।
८) हामीले एक लोकतान्त्रिक उत्तरदायी नेपाल निर्माण गर्नेछौं
जहाँ हामीले हाम्रा स्थानीय र राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू नियमित रूपले चुन्दै, तिनलाई सीमित कार्यावधिमा परिवर्तन ल्याउने मौका दिनेछौं।
जहाँ हामीद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, न्यायपालिका र आर्थिक संरचनाहरूलाई हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कार्यहरूमा उत्तरदायी तुल्याउन सक्छौं।
जहाँ भ्रष्ट, अयोग्य र मार्गदृष्टि विहीन व्यक्तिहरूले होइन वुद्धिमान्, दूरदर्शी अनि एकतालाई प्रोत्साहित गर्नेहरूले नेतृत्व गर्नेछन्।
जहाँ हरेकले आफूले गरेका काममा पूर्ण जिम्मेवार हुन्छन् अनि जहाँ नेताहरूले बोलेर होइन आफ्नो कामले नेतृत्व देखाउनेछन्।
जहाँ लोकतान्त्रिक स्थायित्वको संस्थागत विकास हुनेछ।
९) हामीले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा एक चम्किलो ताराको रूपमा उभ्याउनेछौं
जहाँ हामीले आफ्नो संस्कृति, इतिहास र आर्थिक उन्नतिले गर्दा नेपाली हुनमा गर्व गर्न सक्नेछौं।
जहाँ हामी विश्वका समुन्नत र सभ्य समुदायको रुपमा स्थापित हुन सक्छौं।
जहाँ हाम्रो झण्डा विश्वसामु उच्च रही फहरिरहनेछ र नेपाललाई बुद्धको शान्त र समृद्ध भूमि भनी चिनाउन सक्नेछौं ।
जहाँ हामी हरेकले आफ्नो परिचय गौरवका साथ -“म नेपाली हुँ!” भनेर दिन सक्नेछौं।
आऔं, हामी यसरी नै विवेकशील नेपाली बनौं र नेपाललाई शान्ति र समृद्धिको वाटोमा फर्काई विश्वलाई समेत मद्दत गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याऔं। “अहिले नगरे कहिले ? हामीले नै नगरे कसले?”